Guddiga Maammulka ee Markhaatiyaasha Yehowah Shaqadee Bay Maanta Sameeyaan?
Guddiga Maammulka Shaqadee Bay Maanta Sameeyaan?
Guddigii maammulka hore
Warqaddii guddiga maammulka oo la akhrinayo
Beryihii Kirishtaankii hore wuxuu guddiga maammulka ka sameysnaa koox yar oo ahaa “rasuulladii iyo waayeelladii” Yeruusaalem. Goʼaamada waaweyn oo khuseeya Kiniisadaha Kirishtaanka ah oo dhan guddigaas baa sameyn jiray. (Falimaha Rasuullada 15:2) Guddigaas waxay ka wadahadli jireen waxa ku qoran Qorniinka Quduuska ah waxayna raaci jireen tilmaanta ruuxa Ilaahay. Saas awgeed iyagoo isku qalbi ah bay goʼaan isla gaari jireen. (Falimaha Rasuullada 15:25) Maanta isla habkaas baan raacnaa.
Ilaahay baa isticmaalo siday doonistiisa u sameeyaan. Walaalaha subkan oo ka mid ah Guddiga Maammulka aad bay u daneeyaan Erayga Ilaahay. Waaya arag bayna ku yihiin qorshaynta hawlaheenna iyo waxyaalaha Erayga Ilaahay ku saabsan. Asbuuc walba way isla kulmaan siday uga wadahadlaan waxay walaalaha caalamka jooga oo dhan u baahan yihiin. Sidii waayihii hore bay warqado ama hoggaamiyayaasha safro oo kale inoogu gudbiyaan tilmaamo ku salaysan Kitaabka. Tani dadka Ilaahay waxay ku mideysaa feker iyo shuqulba. (Falimaha Rasuullada 16:4, 5) Guddiga Maammulka waxay masʼuul ka yihiin diyaarinta waxbarashada Ilaahay ku saabsan. Waxayna walaalaha ku dhiirrigeliyaan hawsha wacdiga. Kor bay kala socdaan doorashada walaalaha masʼuuliyad gaar ah loo doortay.
Waxay raacaan tilmaanta ruuxa Ilaahay. Guddiga Maammulka waxay doondoonaan tilmaanta Yehowah Sayidka Caalamka iyo Ciise Madaxa kiniisadda. (1 Korintos 11:3; Efesos 5:23) Walaalaha Guddiga Maammulka isku ma maleeyaan inay yihiin madaxda dadka Ilaahay. Iyaga iyo Kirishtaanka subkan oo dhan waa kuwa “Wanka [Ciise] u raaca meel alla meeshuu tagoba.” (Muujintii 14:4) Guddiga Maammulka aad bay u qiimeeyaan mararka aan Ilaahay u barinno.
Beryihii Kirishtaankii hore yay ahaayeen guddiga maammulka?
Sidee bay maanta Guddiga Maammulka u doondoonaan tilmaanta Ilaah?
Ka arag Falimaha Rasuullada 15:1-35 siday guddigii maammulka oo hore u xalliyeen arrin iyagoo Qorniinka Quduuska ah iyo ruuxa quduuska ah isku halleynayo.
Wadaag Wadaag Guddiga Maammulka Shaqadee Bay Maanta Sameeyaan?